Qaybta 1. Sida loo hagaajin ah oo gurmad ah iPhone / iPod musuqmaasuq
Qaybta 2. Sidee inuu ka soo kabsado xogta ka iPhone / iCloud
In badan oo naga mid ah ay jecelyihiin in ay soo celiyaan qalabka macruufka isticmaalaya Lugood badan iCloud sida ay sahlan in ay isticmaalaan oo si fudud hab la maamuli karo. Si kastaba ha ahaatee, ma aha wax aan caadi ahayn in la helo qaladaad inta la isticmaalayo Lugood si loo soo celiyo qalab aad. Inta badan waxaad ka heli doontaa in Lugood waa in la soo celiyo ka gurmad ah ee aad iPhone / iPad awoodin. Hadda, tani ma aha meel fiican in ay run ahaantii waa, dhamaan xogta muhiim ah in aad leedahay waxaa ku xayiran gaar ahaan marka la habkan.
Hadda, haddii aad sidoo kale waxa soo food saartay arrimaha sida halka celinta qalabka macruufka isticmaalaya Lugood, walaacu ma, sida aan halkan u joognaa in aan kuu sheego sida aad u hagaajin karo xaaladda musuqmaasuq gurmad iPhone / iPad. Inkasta oo raadinaya xalka ugu wanaagsan ee dhibaatadan, waxaan ku dhacay dhulka ee igeeksblog.com, oo ah aasaasaha, Jignesh Padhiyar u muuqataa in ay ku qoran dhammaan xalka macquulka ah si faahfaahsan arrintan.
Waa in aanu si aad ula wadaagto hababka sida ku cad qodobkan. Si aad u aragto article dhabta ah ka igeeksblog.com, fadlan booqo link this - http://www.igeeksblog.com/itunes-cant-restore-from-backup-of-iphone-ipad/ .
Talaabada 1: Hubi cable USB oo aad ku xiran qalab aad sida inkasta oo marar badan iPhone / iPad si sax ah isku xira iyo Lugood sidoo kale waxay aqoonsan tahay qalabka ugu horraysay, waxaa jira waqtiyo cable ayaa soo baxday in arrinta.
Tallaabo 2: Ku dadaal in ku filan oo ah meel u socodka ah ee soo celiyo in ay ka shaqeeyaan. Waxa ugu fiican ee la sameeyo waa in lacag la'aan ah ilaa iyo qaar ka mid ah boos ka disk ah (inta badan ee 'C' wado Windows).
Talaabada 3: Hubi in aad leedahay Lugood version dambeeyay ku rakiban iyo sidoo. Si taas loo hubiyo, u tag About> 'Hubi casriyeysan'.
Talaabada 4: Dad badan ayaa la sheegay in la tirtiro hayaan jir ah oo aan la rabin ayaa sidoo kale ka caawiyay in xaaladan. Sidaas, si fudud ka hor tago oo tirtirto, kuwaas oo in Lugood.
Halkan waxaa ku qoran dhowr siyaabood oo dheeraad ah si uu u xaliyo Lugood celin ka arrinta kaabta on iPhone / iPad
Talaabada 1: Jooji Lugood ee hore markaas oo:
• dadka isticmaala Windows - Riix Start, raadiyo muddada% appdata% isticmaalaya bar raadinta, u tag la barqiyey> Apple Computer> MobileSync> kaabta, ka dibna nuqul galka gurmad (s) oo aad halkan ka heli iyo paste ku saabsan in aad desktop .
• users Mac - fur Library folder on Home shaashadda oo taga si Codsiga Support / MobileSync / kaabta. Hadda, nuqul ka gal gurmad (s) ku qoran halkan si aad desktop.
Talaabada 2: Burcad Lugood iyo markaas:
• dadka isticmaala Windows - Riix "Edit" oo ka menu ka dibna aad rabtid.
• users Mac - Riix 'Lugood' ka menu ka dibna aad rabtid.
Talaabada 3: Riix tab ee 'Qalabka'.
Talaabada 4: Marka la eego qaybta 'hayaan Device ", dooro oo dhan.
Talaabada 5: Riix badhanka "Delete kaabta '.
Talaabada 6: Hadda, dooro fayl gurmad ka desktop iyo jiididda ama iyaga dib ugu galka ee kaabta paste.
Tallaabo 7: Dib-u-soo bandhigista Lugood iyo isku day si loo soo celiyo.
Haddii dhan kor ku yaal aanu shaqayn, markaas Guuleysatey / reboot aad iPhone, kaas oo uu sameeyay trick ee isticmaala badan. Hubi in aad barkinta wax walba oo sidoo kale ka hor inta aadan bilaabin in ay mar kale soo celin.
Waxaan dooneynay inaan si kastaba ha ahaatee waxaad ka heli kale ah oo kaliya haddii ay dhacdo hababka kor ku xusan aan ku guuleysanin, waxaad mar walba isticmaali kartaa software kabashada ugu fiican ilaa taariikhda taasoo Wondershare Dr.Fone ceshan xogta oo dhan si toos ah uga iPhone ama iCloud.
Wondershare Dr.Fone Waa 1-da adduunka ee iPad iyo iPhone software kabashada xogta in kaban karto xogta tirtiray sida farriimaha, xiriirada, qoraalada iwm Waxaa aad loola yaabay oo la shaqeeya iPad, iPod Touch iPhone iyo. Waa maxay ka sii fiican waa in ay dhab ahaantii ma ahan in xogta lumay ay sabab u tahay tirtirka shil ah ama ay sabab u tahay OS ah ku kharribeen (ku dhacdo update software a), kiisaska oo dhan Dr.Fone ka Wondershare shaqayn doonaa sida soo jiidashada ah ee aad u.
Waa kuwan sida ay tahay in la sameeyo.
Kabsado xogta ka iPhone
Talaabada 1: Marka aad soo bixi oo lagu rakibay Wondershare Dr.Fone on your computer by gujinaya halkan , codsiga abuurtaan oo ay la socdaan xira iPhone in kombiyuutarka.
Talaabada 2: Hadda, dooro ikhtiyaarka ah ee Start Scan si ay u bilaabaan aad ka baareyso iPhone, ka dib markii Dr.Fone ayaa waxaa la ogaado.
Tallaabada 3: Marka Wondershare Dr.Fone dhameystiray scan ah, waxaa ku qor lahaa oo dhan alaabta inuu ka soo kabsado si toos ah iyo sidoo kale waa in ay la soo xulay default. Press badhanka uu soo kabsan inuu ku soo bilowdo socodka ah ee ka soo kabatay dhammaan xogta hadda.
Kabsado xogta ka iCloud
Talaabada 1: From interface ugu weyn ee Dr.Fone, dooro ikhtiyaarka ah ee 'ka soo kabsado iCloud File kaabta'. Hadda, codsiga waa inay ku waydiiyaan inaad gasho oo aad faahfaahinta akoonka iCloud.
Talaabada 2: Marka qortey galay iCloud isticmaalaya Dr.Fone, codsiga waa in ay muujiyaan oo dhan iCloud files gurmad in aad xisaabta hadda. Dooro mid ka mid ah aad jeclaan lahayd in la isticmaalo inuu ka soo kabsado xogta ka oo ka dhacay badhanka 'Download' xaq u socota, waxa uu.
Ka dib markii in, in pop up suuqa kala socda, sheeg nooc file doonayso inaad soo bixi lahaa. Hit 'Next' ka dibna 'Scan' si loo bilaabo nidaamka.
Talaabada 3: Si dhakhso ah, waa in Dr.Fone soo bandhigaan natiijada baaritaanada ay ku jiraan dhammaan xogta ah in la soo saaro ka faylka gurmad. Waxaad calaameysaa kuwa aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado oo ka dhacay badhanka 'Ladnaansho'.
> Resource > Lugood > 2 Solutions for Lugood ee kaabta musuqmaasuqa